Muranka siyaasadeed ee Somaliland - BBC Somali
Muranka siyaasadeed ee Somaliland
15 Nofembar 2014
Golaha baarlamanka ee somaliland ayaa maanta u balansan inay ku kulmaan aqalka baarlamaanka ee Hargeysa. Balse mucaaradka ayaa sheegaya in xaruntii baarlamaanka ay ciidan la wareegeen. Isla markaasina la xiray wadooyinkii gala dhismaha baarlamaanka.
Booliska ayaa sheegay in ciidanka baarlamaanka la geeyey ay yihiin kuwo la isku badalay oo aysan jirin wax ka cusub, sidoo kale magaalada Hargeysa xalay waxaa lagu xiray xoghayihii baarlamaanka somaliland Cabdirisaaq Sacad Ayaanle. murankan ayaa salka ku haya ka dib markii la sheegay in Motion ka dhan ah gudoomiyaha baarlamaanka ay wadaan qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka.
Sidoo kale khilaafkan ayaa horay salka ugu hayay qodobo la sheegay in laga badalay diwaan gelinta madaniga ah.Gudoomiyaha baarlamaanka Cabdiraxman Cinro ayaa ku tilmaamay ciidanka baarlamaanka la geeyey inqilaab.